CHII CHINONZI PHOTOCHROMATIC LENSES? - ULLER
CHII CHINONZI PHOTOCHROMATIC LENSES?
Mbudzi 18, 2021
Iwe unofunga kuti zvinokwanisika here kuti kune makristasi anokwanisa kuenderana nerudzi rwechiedza munguva yese? Chokwadi ndechekuti dziriko, uye kwete, hatisi kutaura nezvemagirazi akatorwa kubva mune imwe firimu resainzi.
NDEZVIPI ZVINHU ZVINHU ZVINOITA PHOTOCHROMATIC LENSES?
Chando chinoratidzira kusvika ku80% yemwaranzi ye ultraviolet, iyo inowedzera zvishoma nezvishoma sebasa rekukwirira, ndiko kuti, iyo yakakwirira yakakwirira, iyo huru yeUV spectrum uye, naizvozvo, ngozi huru kune maonero edu. Saizvozvowo, kusaona zvakanaka hakusi ngozi kune utano hwemaziso edu, asiwo kune ngozi kune isu pachedu, sezvo gomo rinogona kuva nengozi uye kukakavara, uye kana tikasaona zvakakwana, tingangoita tsaona.
Ichi ndicho chikonzero masiki asingafanirwe kutariswa semubatsiri chete, asi sechishandiso che Seguridad. Mumusika tichawana akawanda sezvatinoda uye ane makristasi emavara akasiyana, asi, sezvatataura, haisi fashoni yekushongedza, saka hazvisi zvekusarudza ruvara rwekristaro rwunonyatsoenderana nesutu yedu, asi kuti mumwe nemumwe ane chikonzero. Semuenzaniso, brown ndeyemazuva ekupisa kwezuva, pink kune makore ane makore, yero kune inorema mazaya echando ... uye refu etcetera.
Saka zvakakosha here kuti uve nerudzi rwemagirazi zuva rega rega? Tinofanira kutakura repertoire yedu yese nguva yatinofamba pamateru? Hongu kwete, ndosaka tiri kuzokupa malenzi akanyanya echameleonic, akanakira shanduko kubva kune zuva kuenda kune makore mumasekonzi mashoma: photochromic lenses.
Chii chinonzi photochromic lenses? Kunyanya, imhando yegirazi inokwanisa kuona kusimba kwechiedza chezuva uye nekudaro kusviba kana kupenya zvichienderana naro, kufarira kuona. Aya malenzi anosviba kana achibata UV mwaranzi uye anoreruka kana aona kusavapo kwechiedza chezuva. Izvi zvichatibatsira nokusafunga nezvokutakura sipiresi kana zuva risingachafambiki zvakanaka kana kuti tikapedza maawa akawanda tichitsvedza zuva ndokunyura. Kuchinja kwechiedza pagomo kunowanzoitika, sezvo kuchigona kusiyana mumaminetsi mashoma kunyange muchikamu chimwe chete chezuva. Chaizvoizvo nekuda kweichi chikonzero, kunyangwe iwe uri mumwe weavo vasingapedze zuva rose vachinakidzwa neskis, ivo vanozokubatsirawo.
Saka zvinorevei chaizvo "photochromic lenses"? Iyi "magic effect" inogadzirwa sei? Iyo physiognomy yeiyi kuve pachena / kusarerekera kwekristaro munzvimbo dzine rima kubvira, nekuda kwesirivheri kana mhangura chloride, a. kufambira mberi kwaora kana tiri kunze kwakajeka. Ichi chinhu chine photosensitive uye chinovharira inokuvadza ultraviolet mwaranzi nekuitora, kuve nechokwadi chekuchengetedza kwechiratidzo chedu. Mukuwedzera, ivo vanonyatsoenderana nemhando ipi neipi yekupedza kudzidza uye, kunyangwe ivo vachikurudzirwa kune chero munhu, muvamhanyi ine yakanyanya kukosha.
Izvo zvinokuvadza uye zvinokuvadza, zvese munguva pfupi uye kwenguva refu, izvo zvinogadzirwa nemwaranzi pahutano hwedu zvinozivikanwa zvakanyanya. Asi padanho rekuona, zivo haina kupararira zvakanyanya. Kukosha kukuru kwe shandisa mashoko akakodzera Kudzivirirwa kwemaziso edu kwakakosha, sezvo mwaranzi inogona kukonzera kukuvara kwemaziso sekunonzi "upofu hwechando". Aya ndiwo madiki ematambudziko, anoitika chete nekuratidzwa kwemaawa akati wandei, asi kana zvikaenderera mberi, kukuvara kunogona kunge kuri padanho retinal, zvakanyanya muvana nevechiri kuyaruka. Juan Carlos Martínez, purezidhendi weGeneral Council of Colleges of Opticians-Optometrists, akawedzera kuti "mhedzisiro yemwaranzi yeultraviolet iyi ndeyokuti inokurumidzira kutaridzika kwemamwe marudzi echirwere chegomarara uye kuderera kwakabatana nezera, matambudziko maviri ehutano anowanzoitika. ocular panguva yekukura ". Mune zvimwe zviitiko zvakanyanyisa tinogona kuwana muenzaniso wemumhanyi Doug Swingley, uyo ari muIditarod Trail Dog Sled Race muna 2004, aifanira kusiya kosi nekuda kwekukuvara kwechando kune corneas. Uye ndezvekuti kunyange maInuits, avo vaiziva kukuvadza kukuru kunogona kukonzerwa nezuva muchando chena, vakagadzira magirazi ane zvinhu zvakaita semapfupa kudzivirira izvi zvinokanganisa zuva.
MUsiyano PAKATI PAPHOTOCHROMATIC LENSES NEPOLARIZED LENSES
Kana uchinge waziva kukosha kukuru pakusarudza zvinhu zvemhando yepamusoro, kusahadzika kwakawanda kunomuka nekuda kwemhando dzese dzema lens kunze uko, asi inonyanya kuzivikanwa ndeye. musiyano pakati pe photochromic uye polarized lenses uye ndizvo here, chii chakasiyana? Basa remapolarized lenses harisi rekuita nekumisa ma UV maitiro, asi kubvisa zvinoratidzira izvo zuva rinogadzira pamusoro. Nenzira iyi, ichadzivirira izvo, semuenzaniso, miranzi yezuva inorova chando haikanganisi maonero edu, kunze kwekuderedza kuneta kwemaziso.
Photochromic lenses, kune rumwe rutivi, tsvaga chiedza homeostasis, kudzivisa zvinogona kukanganisa kuona. Aya ndiwo ega lens modhi inoita izvi zvinoshamisa maitiro. Mushonga unokurudzira rudzi urwu rwelenzi yemitambo yemakomo, yakagadzirwa nechinhu chisingachinji chinosefa UV mwaranzi.
Isu tinoziva kuti imwe neimwe ine zvayakanakira uye kuti mwenje mutemo wakakosha sekuderedza kukanganiswa kwemheni. Naizvozvo, kana iwe uchifungawo: "Hapana here akambofunga kugadzira musanganiswa weese typologies?", UyeIzvi zvinokufadzai, nekuti hongu, tinodaro. KuUller isu tiri nyanzvi mukukupa iwe yePrimum zvinhu zvinogara uchitarisira hutano hwako hwekuona, ndosaka tine mhando dzedu dzeski masks ane photochromic lenses, kuwedzera kune photochromic, mwanakomana zvakare polarized. Izvi, zvakaedzwa nenyanzvi, zvinosiyana kubva kuCAT.1 kusvika kuCAT.3 mumasekonzi mashomanana, zvichigadzirisa kune chero mamiriro ekunze uye nekudzivirira kwayo UV-4000. Malenzi anonyanya kushandiswa ari muUller, uye sezvo isu tichifungidzira kuti mushure mekuziva izvi iwe hausi kuzoda kumirira kusarudza yako, tinokusiya pano mienzaniso yedu yechando, yakanyatsokodzera kutonhora kwakanyanya. Kudzitenga kupi? Kungodzvanya pachikamu ski masiki.
Asi photochromic lenses ichange iine chimwe chinokanganisa, handiti? Kufanana nezvose, ivo havana kukwana uye kuchine nzira refu yekuenda. Imwe yacho inguva inotora kusviba kana kupenya, kutenderedza miniti imwe. Imwe yacho ndeyekuti uku kunzwisiswa kwechiedza kunoitwa chete nechiedza chezuva, uye kwete nechiedza chekugadzira, asi sezvo isu takanga tisiri kuronga kupinda muMarchica navo, iyi haisi dambudziko, sezvo vachagara vakagadzirira kutibatsira kupa zvese. track.. Kune rimwe divi, mamwe marudzi emagirazi ane aya lenses haaburitse iyi mwenje / yakasviba mhedzisiro mune yakadzika tembiricha, haisi iyo kesi yemamodheru edu, nekuti akasikirwa ega emitambo yechando.
PHOTOCHROMATIC LENSES ZVINOREVEI?
Photochromic lenzis malenzi anonzwa kuchiedza chezuva anosviba kana kupenya zvichienderana nawo, achipikisa kupenya kwepatiri. Ndiko kuti, kana isu tiri panguva yezuva nechiedza chakawanda, ivo vanosviba kuti vafarire chiono, ivo vachatidzivirirawo kubva kune UV mwaranzi.
NDEZVIPI ZVAKANAKA: PHOTOCHROMATIC GLASSES OR POLARIZED GLASSES?
Mabasa ese ari maviri akasiyana. Kana ari mapolarized, haagadzirisi kusimba kwechiedza, asi kuti anobvisa maratidziro ayo zuva rinogadzira panzvimbo dzakaita sechando. KuUller mamodheru edu ane mabasa ese ari maviri, sezvo ari polarized uye photochromic panguva imwe chete.
NGUVAI YOKUSHANDISA PHOTOCHROMATIC LENSES?
Inogona kushandiswa chero nguva uye chero munhu, munhu wese achawana mabhenefiti makuru muchiratidzo chavo, asi pamusoro pezvose inokurudzirwa zvikuru kune vatambi vanoita mitambo mumakomo kana mumhanyi.
PHOTOCHROMATIC LENSES ANOSHANDA SEI?
Ichi chiedza-chakasviba basa chinogadzirwa mumasekonzi mashoma nekuda kwechinhu chinosvibisa makristasi uye chinoitwa nekubuda kwezuva, hachishande nechiedza chekugadzira.
Zvimwe zve: Trends